Guide Absolute Billowga ah ee Google Analytics - Shiinaha Litbright Shumaca (shijiazhuang)
Litbright Shumaca (shijiazhuang) Co., Ltd
Church / Shumaca Tiir
Qurxinta Shumaca / Art Shumaca
Guide Absolute Billowga ah ee Google Analytics
Haddii aadan aqoon waxa Google Analytics waa, ma aydnaan rakibay on your website, ama waxa lagu rakibay laakiin marna eegto xogta aad, ka dibna this post waxa loogu talagalay adiga. Inkastoo ay adag tahay dad badan in ay aaminsan yihiin, waxaa weli jira websites in aan la isticmaalayo Google Analytics (ama wax Analytics, waayo, xaalkan in) si loo qiyaaso gaadiidka. In this post, waxaan u socoto si loo eego Google Analytics ka bilaabayso buuxda ee view. Waa maxay sababta aad u baahan tahay, sida loo helo, sida loo isticmaalo, iyo workarounds in dhibaatooyinka caamka ah.
Maxaad website kasta oo milkiilaha u baahan Analytics Google
Ma leedahay blog a? Ma leedahay website a ma guurto ah? Haddii jawaabtu tahay haa, haddii ay ku habboon yihiin shakhsi ama ganacsi la isticmaalo, ka dibna aad u baahan tahay Google Analytics. Halkan waxaa ku qoran dhowr ka mid ah su'aalaha badan oo ku saabsan aad website in aad ka jawaabi kartaa adigoo isticmaalaya Google Analytics.
Immisa qof ayaa soo booqan my website?
Xagee martida ku noolaan?
Ma u baahan tahay website a mobile-friendly?
Maxaa websites gaadiidka aan website soo diraysid?
Waa maxay tabaha marketing eryi gaadiidka ugu badan si aan website?
Taas oo pages on my website waa kuwa ugu caansan?
Imisa martida ayaan beddelay raadad ama macaamiisha?
Xaggee martida aan diinta ka yimaadeen oo taga on my website?
Sidee baan u hagaajin karaa xawaare aan website ee?
Maxaa content blog sameeyo martida sida ugu ah?
Waxaa jira dad badan, su'aalo badan oo dheeraad ah in Google Analytics ka jawaabi kartaa, laakiin kuwani waa kuwa ugu muhiimsan ee inta badan milkiilayaasha website. Haddaba bal aynu eegno sida aad ka heli kartaa Google Analytics on your website.
Sidee si loo soo dajiyo Google Analytics
First, aad u baahan tahay xisaab a Google Analytics. Haddii aad ku leedahay xisaabta hoose Google in aad isticmaasho adeegyada kale sida Gmail, Google Drive, Calendar Google, Google+, ama YouTube, markaa waa in aad dhigay aad Google Analytics isticmaalaya in account Google. Ama waxaad u baahan tahay si ay u abuuraan mid cusub.
Tani waa in ay ahaataa account Google a aad qorsheyneysid inaad weligaaba xajisaan oo keliya waxaad marin u leedahay. Waxaad mar walba siin kartaa si aad u Google Analytics dadka kale hoos wadada, laakiin aadan rabin in qof kale in ay si buuxda gacanta ugu dul bixiyaan.
tip Big: yaanay qof (aad naqshadeeye web, sameeysa web, web ciidankii, qofka SEO, iwm) la abuuro Analytics aad website ee Google warsan ay account Google u gaar ah si ay karaa "maareeyaan" waxaa idiin. Haddii adiga iyo qofka ka qayb siyaabo, waxay idinka qaadan doonaa xogta Google Analytics iyaga la, iyo waxaad yeelan doontaa si ay u bilaabaan oo dhan.
Calan u xisaabtaada iyo hantida
Marka aad leedahay xisaabta Google ah, waxaad tagi kartaa Google Analytics oo guji Sign galay button Google Analytics. Waxaad markaas la salaamay doonaa saddex tallaabo waa inaad qaado si aad u qotomiyey Google Analytics.
Ka dib marka aad riix badhanka Sign Up ah, waxaad buuxin doontaa macluumaad ah ee aad website.
Google Analytics bixisaa sarayntii in uu abaabulo xisaabtaada. Waxaad heli kartaa ilaa 100 xisaabaadka Google Analytics ka yar hal account Google. Waxaad heli kartaa ilaa 50 guryaha website ka yar hal account Google Analytics. Waxaad heli kartaa ilaa 25 views ka yar hal website hantida.
Halkan waxa ku xaaladood yar.
Seenyada 1: Haddii aad leedahay mid ka mid ah website, waxa kaliya ee aad u baahan tahay mid ka mid ah Google Analytics warsan la mid website hantida.
Seenyada 2: Haddii aad leedahay laba websites, sida mid ka mid ah ee aad ganacsi iyo mid aad shakhsi isticmaalka, laga yaabaa in aad rabto in aad la abuuro laba xisaab, magaca mid ka mid ah "123Business" iyo mid "Personal". Markaas aad u yeeli doonaa website ganacsi aad ka yar account 123Business iyo website aad shakhsi hoos account Personal aad.
Marxalada 3: Haddii aad leedahay ganacsi dhawr, laakiin in ka yar 50, iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay leedahay mid ka mid ah website, laga yaabaa in aad rabto in aad kulligood dibadda u saaray hoos account Business a. Markaas lahayn xisaab ah Personal aad websites shakhsiyeed.
Seenyo 4: Haddii aad leedahay ganacsi dhowr iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay leedahay daraasiin websites, waayo, wadar ahaan in ka badan 50 websites, laga yaabaa in aad rabto in aad saaray ganacsi kasta oo ay account gaar ah, sida account 123Business, account 124Business, iyo wixii la mid ah.
Ma jiraan siyaabo sax ama qalad si aad u Google Analytics account-waxa kaliya oo wax ku xiran sida aad u rabto in uu abaabulo goobaha aad. Waxaad had iyo jeer magaca karaa xisaabaadka ama guryaha aad hoos wadada. Ogsoonow in aad guri (website) oon karin inay ka mid account Google Analytics in kale-aad leedahay lahaa in la dhiso guri cusub ka yar account cusub iyo lumin xogta taariikhiga ah ee aad ka soo hantida asalka ururiyey.
Waayo, guide bilaabayso buuxda ee, waxaan u socoto in ay qaataan aad leedahay mid ka mid ah website oo u baahan kaliya hal view (default ah, oo dhan view xogta. Mudanayaasha ayaa eegi doono wax sidan oo kale.
Dureeri this, waxaad yeelan doontaa fursad u rights reserved meesha xogta Google Analytics la wadaagi karto.
Ku rakib aad code raadraaca
Marka aad dhamaysid, aad riix badhanka doonaa ID Hel socodka. Waxaad heli doontaa gujisid ah shuruudaha Google Analytics iyo xaaladaha, oo aad u leeyihiin in ay ku heshiiyaan in ay. Markaas waxaad ka heli doontaa in aad code Google Analytics.
Tani waa in lagu dhejiyaa on page kasta on your website. xirxiro waxay ku xirnaan doontaa nooca website aad leedahay. Tusaale ahaan, waxaan u leeyihiin website WordPress a on my domain gaar ah oo isticmaalaya Framework Genesis ka. qaabka waxa uu leeyahay meel gaar ah in aad ku darto madax iyo footer qabnay in aan website.
Haddii kale, haddii aad qabto WordPress a on your domain gaar ah, waxaad isticmaali kartaa Analytics Google ah by plugin Yoast si loo soo dajiyo aad code si fudud aan loo eegayn waxa theme ama qaabka aad isticmaalayso.
Haddii aad leedahay website a dhisay files HTML, waxaad ku dari doonaa code raadraaca hor </ madaxa> tag on kasta oo ka mid boggaga aad. Waxaad ku samayn kartaa adigoo isticmaalaya barnaamijka editor qoraal ah (sida TextEdit for Mac ama buugayga for Windows) ka dibna uploading file in aad web ciidankii la isticmaalayo barnaamijka FTP ah (sida asFileZilla).
Haddii aad qabto Shopify dukaanka e-commerce ah, inaad goobaha Store Online tegi doonaa oo paste in aad code raadraaca halka ay ku qeexan.
Haddii aad leedahay blog a on Tumblr, aad si aad blog tegi doonaa, riix batoonka Theme Edit midig sare ee aad blog, ka dibna geli kaliya ID Google Analytics ee goobaha aad.
Sida aad arki karto, rakibo ee Google Analytics kala duwan oo ku salaysan madal aad u isticmaasho (nidaamka maamulka content, website dhisaha, software e-commerce, iwm), theme ee aad isticmaasho, iyo plugins aad u isticmaasho. Waa inaad awoodid si aad u ogaato tilmaamaha fududahay in la rakibo Google Analytics on website kasta oo ay sameeyaan search web aad madal + sidii ay u rakibi Google Analytics ah.
Ka dib marka aad rakibi code raadraaca on your website, waxaad u baahan doontaa in reserved yar (laakiin aad u faa'iido badan) dhacna profile aad website ee Google Analytics. Kanu waa goob Goolal. Waxaad ka heli kartaa adigoo gujinaya link Admin sare ee aad Google Analytics ka dibna gujinaya Goolal hoos column View aad website ee.
Goolal ka sheegi doonaa Google Analytics marka wax muhiim ah ayaa ka dhacay on your website. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay website halkaas oo aad ku dhalin raadad marayo qaab xiriir ah, waxaad u baahan doontaa si aad u hesho (ama abuuro) mahadsanid page a in kooxda martida loo soo afjaro dul mar ay soo gudbisay macluumaadka lagala xariiro. Ama, haddii aad leedahay website halkaas oo aad ka iibiyaan badeecada, waxaad u baahan doontaa si aad u hesho (ama abuuro) final ah adiga ama bogga xaqiijinta martida dhulkii ku dul mar iibsi ay dhammeeyaan mahad.
waqti Post: Aug-10-2015
Dhexena 702, Bldg, A Lingshi Comm.Bldg., NO.351 Xinhua Road, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha